Hitsena anay ny Tapaka ny Tetezana tamin'ny taona: Shinoa zazavavy noraisin'ny Amerikana dia mampivondrona amin'ny ray aman-dreny niteraka, Shina - Baovao Asia Iray
Hitsena anay ny Tapaka ny Tetezana tamin’ny taona: Shinoa zazavavy noraisin’ny Amerikana dia mampivondrona amin’ny ray aman-dreny niteraka, Shina — Baovao Asia Iray
Tafalatsaka ao amin’ny tantaram-pitiavana fomba amam-panao, ny Tapaka ny Tetezana ao Hangzhou, Shina dia mahasarika mpizaha tany lehibe izay misarika ny am-polony tapitrisa ny mpitsidika isan-taona any amin’ny morontsiraka Andrefana Lake. Satria, ny lehilahy iray antsoina hoe Xu Leda braves ny ao anatin’izany ny hiverina any amin’ny tetezana isan-taona tamin’izany andro izany. Fa izy dia tsy misy olon-tsotra mpizaha tany naka tamin’ny zavatra hita. Tonga tany am-boalohany ao amin’ny maraina, ary mitoetra mandra-tara ny tolakandro, Leda mitazana ny miatrika ny vahoaka, nanantena hahita hafahafa, nefa tsara tarehy-ny iray tamin’ireo zanany vavy very efa ela dia ela izay. Satria i Shina nanomboka iraisam-pirenena adoptions ao amin’ny tany am-boalohany s, ray aman-dreny nitaiza kely ny vaovao momba ireo zaza teraka ny fianakaviana. Teraka ny ray aman-dreny ao Shina matetika no tsy handao ny mombamomba azy sy hanjavona raha tsy misy soritry rehefa relinquishing ny zanany. Ny tsy fahampian’ny fahalalana momba ny fiaviany ravina maro adoptees amin’ny banga izay mitondra ny faniriana hahita ny fakany, indrindra rehefa tonga ny taona, ary miandraikitra ny maha-izy azy. Fa ny ray aman-dreny niteraka fikarohana ao Shina no sarotra amin’ny tsara indrindra ary, ka vitsy ny mahita ny daty, misy kely toro-hevitra ho fiatrehana ny fihetseham-po be pitsiny manodidina ny tsy fahita firy ny fotoana nahaterahan’i ny fianakaviana no hita. Ny Xu sy Poehler fianakaviana mahalala ireo fihetseham-po azony mihitsy izy ireo satria efa niaina izany nandritra ny taona. Leda, ary ny vadiny Fefy nilaza tamin’ny BBC fa rehefa manambady ao sy ny fandraisana ny voalohany ny zanany vavy, izy ireo dia nanapa-kevitra ny manana ny ankizy iray hafa mba ny lahimatoa zaza, dia tsy ho irery tsy misy ny mpiray tam-po. Fa manome ny lahimatoa ny mpiray tam-po no mandika ny politikan’ny zaza tokana, ny fepetra nampiditra ny governemanta Shinoa amin’ny fanaraha-maso ny fiakaran’ny fitomboan’ny mponina. Tsy fankatoavana izany fitsipika izany dia niafara tamin’ny sazy henjana, anisan’izany ny hantsana onitra, very ny fananana, voatery ny fanalan-jaza ka hiteraka. Rehefa Fefy ny fitondrana vohoka dia hita tao amin’ny volana fahadimy, ny fandrindram-piterahana manam-pahefana nangataka ny fanalan-jaza ary nandrahona ny baomba mandatsa-nidina an-tranony.
Tsy afaka manala izany. ‘Noho izany, Leda, ary Fefy nanapa-kevitra ny hanomboka ny fiainana an-mihazakazaka ny hanome fanabeazana ny ankizy, na dia natao nanome azy olon-kafa. Izy nanafina ny sambo eo amin’ny renirano izay Fefy niteraka ny zanany vavy. Telo andro taty aoriana, Leda nitondra ny zaza ny legioma tsena izay dia nanoroka ny matory zaza-katsaram-panahy rehefa fantany fa izany dia veloma. Fa fotsiny fa tsy handao azy amin’ny oroka ihany koa izy niala ny fanamarihana. Herintaona taty aoriana, Michigan roa Rota sy Ken Poehler nandray ny vavy Ha avy amin’ny Suzhou Fiahiana ara-Tsosialy Institute. Rota mbola mahazo ara-pihetseham-po izy rehefa mahatsiaro ny fotoana izay dia nanolotra ny zanany vavy ho azy. Miaraka amin’ny zanany vavy, ny Poolers ihany koa ny tsy nampoizina nahazo sombin-taratasy nosoratan Ha ny ray aman-dreny niteraka. Ny fanamarihana niafara tamin’ny mpankafy fangatahana: ‘Raha Andriamanitra dia manana fangorahana ho antsika sy tsy miraharaha antsika, dia aoka isika hihaona ao amin’ny Tapaka ny Tetezana eo amin’ny Andrefana Lake ao Hangzhou ny marainan’ny Shinoa volana daty jolay na taona. ‘Mitovy ny Andron’ny mpifankatia, ny daty ny Volana jolay no andro manokana ao Shina, andro iray ho an’ny olon-tiana any mihaona ary tafaraka indray. Ny Poolers nieritreritra kely ny fanamarihana toy ireo nanorim-ponenana any an-fiainam-pianakaviana, fa ny folo taona taorian ny nolaniana Ha, dia nahita ny irak’andriamanitra tamin’ny alalan’ny namana ary naniraka azy ny tetezana eo amin’ny nanendry andro nangataka ao amin’ny naoty. Ny irak’andriamanitra no nahita ny ray aman-dreny niteraka araka ny tantara dia nanjary vaovao ao Shina, ary ny babo-pirenena mpihaino. Leda sy ny Fefy dia faly mandray ny vaovao momba ny zandriny vavy sy nanomboka drafitra ho an’ny la réunion. Fa rehefa ny mpitondra no lasa tsy te hanohy sy ny nanjavona, ny fifandraisana very. Raha ny nahaterahan’i ny fianakaviana faly noho ny fifandraisana, ny Poolers no sahiran-tsaina rehefa manoloana ny zavatra izay indrindra ao anatin’ny teny Sinoa fananganana vondrom-piarahamonina nisy niteny dia tsy azo atao. Ken ‘ankehitriny’, ary Rota dia ‘petrified’ izy ireo araka ny grappled voalohany amin’ny zava-misy ny mizara ny vavy amin’ny olon-kafa. Rehefa nieritreritra lalina, nanapa-kevitra izy ireo miandry ny hizara ny vaovao amin’ny Ha-fa aoka ny ray aman-dreny niteraka fantatro fa izy no nikarakara tsara ary tena tia azy ny ray aman-dreny nitaiza. Leda, ary Fefy mbola manao ny fanao isan-taona mitsidika ny tetezana amin’ny Volana jolay ny Fahafantarana fa izy no manana ny zanany vavy izay mbola velona tsara ao Etazonia dia nanome azy ireo fanantenana isan-taona, fa izany no ho taona izy ireo dia ho tafaray indray, afa-tsy ho diso fanantenana indray. Ho nanontany tena izy ireo hoe nahoana izy ireo no niandry, dia natahotra izy, fa ny zanany vavy nanao lolompo na fa izy ireo dia ho voasazy amin’ny Andriamanitra, izay tsapan’izy ireo fa izy ireo mendrika. Ny Poolers nanapa-kevitra hiandry Ha hanehoany ny faniriana hahafantatra bebe kokoa momba ny nahaterahan’i ny fianakaviana talohan’ny mizara ny zavatra fantany. Niady mafy izy ireo ny fahalalana rehefa nandeha ny taona mandra-pahatongan’ny Ha farany nangataka ny fanontaniana tsara azy, raha izy. Rehefa ny ray aman-dreny nitaiza nilaza taminy ny zavatra fantany, Ha-panontaniana ny antony tsy niandry ela ny hilaza aminy. Ken, ary Rota no niteny tamin’ny BBC izy ireo nenina, na dia mahatsapa izy ireo dia nanao ny fanapahan-kevitra tsara indrindra tamin’izany fotoana izany. Ny zava-miafina sy nenina no hanavotra ny Ha-ny fifandraisana amin’ny ray aman-dreniny. Ha nanapa-kevitra ny handeha amin’ny tetezana ao Shina mba hitsena azy fanabeazana ny ray aman-dreny eo amin’ny nanendry andro.
Ken sy Ruth nanolo-tena hiaraka aminy any Shina, fa Ha-nihena
Raha ny iray amin ‘ireo ray aman-dreny miandry ao an-toerana, dia efa foana ny hoe an-trano, Ha dia handeha fa tetezana ao Hangzhou hihaona hafa hametraka ny ray aman-dreny izay miandry azy ao an-tokantrano sisa ela lasa izay, dia manomboka ny fizarana vaovao’ ny tantara. Jereo hoe inona no mitranga rehefa Ha mahafeno ny fianakaviany amin’ny BBC Tantara, Hihaona Amiko eo amin’ny Tetezana — teo ny BBC Tranonkalam-baovao amin’izao fotoana izao. Na mijery BBC Ny Tontolo izao amin’ny BBC Tontolo Vaovao, Starhub fantsona
Izay Mahita Vehivavy Shinoa ho amin'ny Fanambadiana - Iraisam-pirenena ny Fiarahana Torohevitra ho an'ny Lehilahy Mitady Vady Vahiny →